musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » 60% yevaAmerica havakwanisi kufamba pamusoro pezororo
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
.60% yevaAmerica havakwanisi kufamba pamusoro pezororo.
Ongororo iyi yakawana kuti 29% yevaAmerica vangango shanyira Thanksgiving uye 33% vangangoenda kuKisimusi - kuwedzera kubva pa21% ne24%, zvichiteerana, zvichienzaniswa na2020. Vaya vanoronga kufamba panguva yezororo vanotarisira kutyaira, asi kukwira kwemitengo yegasi kunogona kudzikisira zvirongwa izvozvo.
Mumwe chete muvatatu vekuAmerica anoronga kuenda kuKisimusi, uye kunyange vashoma vanoronga kufamba kuKutenda.
68% yevafambi veKutenda vanoronga kugara nemhuri kana shamwari, nepo 22% vachironga kugara muhotera.
66% yevafambi veKisimusi vanoronga kugara nemhuri kana shamwari, nepo 23% vachironga kugara muhotera.
Nepo kukwira kwemitengo yekudzivirira kurwisa COVID-19 kwakawedzera nyaradzo yevafambi, vanhu vazhinji vekuAmerica vachiri kusarudza kugara pamba mwaka uno wezororo, sekureva kweongororo yenyika yakapihwa American Hotel & Yekugara Association (AHLA).
Ongororo iyi yakawana kuti 29% yevaAmerica vanogona famba yeKutenda uye 33% vanogona kuenda kuKisimusi-kuwedzera kubva pa21% uye 24% zvichiteerana, tichienzaniswa ne2020. Avo vanoronga kufamba pamusoro pezororo vanotarisira kutyaira, asi kukwira kwemitengo yegesi kunogona kudzikisira zvirongwa izvozvo.
Ongororo yevakuru zviuru zviviri nemazana maviri yakaitwa Gumiguru 2,200 - Mbudzi 30, 1, neMorning Consult pachinzvimbo che AHLA. Zviwanikwa zvakakosha zvinosanganisira zvinotevera:
Mumwe chete muvatatu vekuAmerica anoronga kuenda kuKisimusi (33% ingangofamba, 59% isingaite), uye kunyange vashoma vanoronga kufamba kuKutenda (29% ingangoita, 61% isingaite).
Zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana zvevanhu vekuAmerica vanoti vane hurongwa hwekufamba nzendo shoma uye zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana hurongwa hwekufamba nzendo pfupi nekuda kwekukwira kwemitengo yepeturu.
Vafambi vekutandara vari kugadzirisa akati wandei kuzvirongwa zvavo zvekufamba zvichienderana nemamiriro ezvinhu edenda, kusanganisira kungofamba mukati mekutyaira (58%), kutora nzendo shoma (48%), uye kutora nzendo pfupi (46%).
Pakati pevabereki vane vana vari pasi pemakore gumi nemaviri, 12% vanoti kuwanikwa kwejekiseni revana vane makore 41-5 ekuberekwa kuchaita kuti vakwanise kufamba.
68% yevafambi veKutenda uye 64% yevafambi veKisimusi vanoronga kutyaira, zvichienzaniswa ne11% uye 14%, zvichiteerana, vanoronga kubhururuka.
Kunyange majekiseni akabatsira vafambi kuti vanzwe kugadzikana, kukwira kwemitengo yegasi uye kuenderera mberi kwekunetsekana nedenda iri kuita kuti vanhu vazhinji vekuAmerica vazeze kufamba panguva yezororo. Kunyangwe paine kushomeka kuri kutarisirwa mukufamba kwezororo gore rino, mahotera acharamba akatarisana nekudonha kwehupfumi kubva padenda, zvichisimbisa kukosha kwekunangwa kwemubatanidzwa, seSave Hotel Jobs Act, kutsigira indasitiri nevashandi vayo kudzamara kufamba kwadzoka zvizere.
Kunyangwe kuve pakati pezvakanyanya kurova, mahotera ndiwo chete chikamu chevaenzi uye indasitiri yekutandarira ichiri kugamuchira yakananga denda kubva kuCongress.